NetbootCD: 1 တိုက်ရိုက် CD၊ Linux ဖြန့်ချိမှုများစွာ | Linux မှ
NetbootCD: 1 တိုက်ရိုက် CD၊ Linux ဖြန့်ချိမှုများစွာ
NetbootCD တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် တိုက်ရိုက် CD Tiny Core Linux ဖြန့်ဖြူးမှုကိုအခြေခံသည်။ NetbootCD ၏အထူးသဖြင့်၎င်းသည်သင့်အား download လုပ်ရန်နှင့် run ရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည် ကွန်ယက်ထည့်သွင်းသူများ ၏ (netboot) အများအပြား Linux ကိုဖြန့်ဝေ.
ဒါဟာတစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာအဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ် ဆွစ်ဓါးCD တစ်ချပ်လောက်ပဲရတယ် မျိုးစုံ distros တပ်ဆင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေ။ တစ်ခုတည်းသောအရေးကြီးသောလိုအပ်ချက်မှာကောင်းမွန်သောအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိရန်ဖြစ်သည်။
အောက်ပါ Linux ဖြန့်ဝေမှုကို NetbootCD မှတပ်ဆင်နိုင်သည်။
Debian GNU / Linux (ပုံမှန် & နေ့စဉ်တပ်ဆင်သူများသာ)
NetbootCD သည် GRUB4DOS ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းနှင့် Tiny Core Linux နှင့်၎င်း၏ "အငယ်ဆုံးကလေး" ဖြစ်သော Micro Core ဒေါင်းလုပ်ချခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်။
Ubuntu ကို NetbootCD မှ install လုပ်ခြင်း
NetbootCD ကို Download လုပ်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » NetbootCD: 1 တိုက်ရိုက် CD၊ Linux ဖြန့်ချိမှုများစွာ
Computer Guardian ဟုသူကပြောသည်
ဒီဖြေရှင်းနည်းကိုကျွန်တော်ရှာတွေ့နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ကတော့၎င်းသည်၎င်းကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဖြန့်ဖြူးသူစာရင်း (ကန့်သတ်ထားသောအခြားဖြန့်ဝေမှုများမပါ ၀ င်ပါ) ကိုကန့်သတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့ဆောင်းပါးကို Debian စာရင်းထဲမှာငါတင်လိုက်တယ်။ ရဲဘော်ရဲဘက်တစ် ဦး ကဒီလင့်ခ်ကိုပို့လိုက်ပြီးဒီဆောင်းပါးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆောင်းပါးအသစ်တစ်ခုကိုတင်လိုက်တယ်။
အမှန်တရားကတော့ကျွန်တော်မသိဘူး ... ဒါပေမယ့်ဒါကစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပါ။ ငါဖြစ်နိုင်သည်နီးပါးဆက်ဆက်နိုင်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ရွှင်လန်း! ရှင်ပေါလု။
ယေရှု Ruiz ဟုသူကပြောသည်
Jesus Ruiz ကိုပြန်ပြောပါ
Tello Bautista ဟုသူကပြောသည်
ဒီဟာကပဲငါရှာနေတာပဲ !! ငါဒါကို manually လုပ်တော့မယ်။ ဒါပေမယ့်ကြီးတယ်၊ ဒါကငါ့ကို xD time သက်သာစေမယ်
Tello Bautista အားစာပြန်ပါ
distro နှင့် Wi Fi ပေါ်မူတည်သည်
“ အဲဒါဟာကျွန်တော့်အတွက်ဘောလုံးပဲလို့ထင်ရပေမယ့် Arch Linux နဲ့ဘာကြောင့်ဆက်နေသလဲ။ အလွန်ရိုးရှင်းပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ NetbootCD က Arch ကိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းမှမကင်းလွတ်စေပါ။
ဒါပေမယ့်စက်ဘီးစီးတာ ၀ န်ထမ်းတွေကိုသုံးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်»
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ... နောင်လာမယ့်ပို့စ်တစ်ခုမှာအကြောင်းအရာတခုခုရေးမယ်။
၎င်းကို distro နှင့် Wi Fi card တို့ကဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ Slackware သည်သင့်အားထိုသို့ပြုရန်ခွင့်မပြုသော်လည်း Mandriva က hardware တော်တော်များများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
LibreOffice ကို Cloud, iOS နှင့် Android တွင်ရနိုင်သည်
ထိပ်ဖျား: Arch Linux တွင် locale.sh အမှားကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်